Portugal iyo Spain oo ku kala tagay barbar dhac iyo Ronaldo oo saddex Gool dhaliyay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Portugal iyo Spain oo ku kala tagay barbar dhac iyo Ronaldo oo...
Portugal iyo Spain oo ku kala tagay barbar dhac iyo Ronaldo oo saddex Gool dhaliyay
Cayaartan oo aheyd mid siweyn loo wada sugayay islamarkaana isha lagu wada hayay ayaa daqiiqadihii ugu horeeyayba waxaa u suurtagashay kooxda Kubadda Cagta Portugal in ay hellaan Goolkoodii ugu horeeyay oo ahaa Rigoore waxaana u dhalinayay Lacibkooda Cristiano Ronaldo laftirkiisa lagu gallay Rigoorada.
Laakiin Spain oo mar walba u muuqatay in ay ka gacan sareysay Portugal ayeey u suurtagashay in ay hellaan goolkoodii barbar dhaca oo uu u dhaliyay weerar yahankooda Diego Costa oo u awood sheegtay difaaca Portugal.
Iyadoo maanka lagu wada hayay in nasiinada xili cayaareedka hore lagu kala bixin doono 1-1 ayaa waxaa natiijada badalley Cristiano Ronaldo oo goolkii labaad ku hubsaday shabaqa kooxda kubadda Cagta Spian, waxaana lagu kala nastay 2-1.
Markii leysugu soo laabtay wareegii labaad ee cayaarta Portugal waxaa soo wajahay culeys aad u weyn oo uga imanayay weerar yahannada Spain oo Kubad qurux badan la soo shirtagay, waxaana ay mar walba Kubaddu ay aheyd mid ku dul-wareegeysay Goolka kooxda Portugal.
Isku dhiidhiiib si wacan looga soo shaqeeyay ayeey ugu suurtaga-gashay Spain in ay la yimaadaan Goolkoodii labaad kaddib markii Kubad uu madaxa ku soo baasay Sergio Busquets uu shabaqa ku hubsaday Costa oo goolkaas labaad dhaliyay daqiiqadii 55-aad.
Wixii xiligaa ka danbeeyay xaalka ma wacneyn dhinaca Portugal kubadda-na Aaggooda ayeey u janjeersatay waxaana lagu keenay Goolkii Saddexaad oo banaanka uu ka toogtay Nacho Fernandez daqiiqaddii 58-aad kaddib kubad ay ka soo shaqeeyeen David Silva iyo Isco .
Kaddib dhacdooyinkaas Portugal waxaa ay isku dayayeen in kubadda si sax ah u geeyaan aagga goosha Spain balse ma aysan dhaceyn xilli Spain ay ciyaarayeen kubad baasas ku dhisan oo cajiib ah .
Dhamaadkii Portugal waxaa ay dadaal ugu jiraan in ay keeneen goolka bar bar dhaca waxaa ayna heleen Free Kick kaasi oo gool cajiiba ah u turjumay Ronaldo waxaa uuna goolkaas yimid daqiiqadii 88-aad xilli uu u ahaa Ronaldo goolkaas kiisii 3-aad ee kulanka.